#ပုဂံမြို့တွင် #ဗလီဆောက်ခြင်းအား #သဘောမတူပါက #တာဝန်ရှိသူများ #သိရှိနိုင်စေရန် ဤပိုစ့်အား #shareေ#ပးကြပါ | democracy for burma
#ပုဂံမြို့တွင် #ဗလီဆောက်ခြင်းအား #သဘောမတူပါက #တာဝန်ရှိသူများ #သိရှိနိုင်စေရန် ဤပိုစ့်အား #shareေ#ပးကြပါ
tags: -mosque, ပုဂံမှာ ဗလီဆောက်မဲ. သီရိရွာ ဆိုတာ, ပုဂံမြို့တွင်, အင်းဝ မီဒီယာ, Burma, Myanmar, pagan, Rakhine
ပုဂံမြို့တွင် ဗလီဆောက်ခြင်းအား သဘောမတူပါက တာဝန်ရှိသူများ သိရှိနိုင်စေရန် ဤပိုစ့်အား share ပေးကြပါ
~~~~~~~ပုဂံမှာ ဗလီဆောက်မဲ. သီရိရွာ ဆိုတာ~~~~~~
ပုဂံမှာ ဗလီဆောက်မဲ့ ရွာနာမည် အရင်းကတော့ သီရိပစ္စယာရွာပါ။ အရင်က ရွာပေါ့ အခုတော့ ပုဂံမြို.ကြီးရွေ့လာပြီးတဲ့ နောက်မှ၇ပ်ကွက် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဆွယ်တော်လေး
ဆူမှာ တစ်ဆူ အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ လောကနန္ဒာ ဘုရားအနီးမှာ တည်ရှိပြီး အရင်တစ်ချိန်က ကမ္ဘာ.
ကုန်သဘောင်္ကြီးများ ကုန်ရောင်းကုန် ၀ယ်လုပ်တဲ့ ဆိပ်ကမ်းသာတဲ့ ရွာလေးပါ။ သီရိပစ္စယာ နန်းတော် ရာဟာလဲ ယခုအချိန်ထိအောင် နေရာအမှတ်သား ကျောက်စာတိုင်များ အခိုင်အမာ
တည်ရှိနေသောကြောင့် ရှေးမြန်မာဘုရင်များ နန်းတော်တည်ခဲ့သော နေရာဖြစ်ပါတယ်။
ပုဂံ ကိုဘုရားဖူးလာသူတိုင်း သီရိပစ္စယာ ရွာလေးကိုတော. မရောက်မနေရ ရောက်ကိုရောက်
ရပါတယ်။ လောကနန္ဒာ ဆွယ်တော်မြတ်ကြီး ရှိနေတာရယ်။ အရပ် ၈ပေကျော် တချိန်ကခါက
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ မဇီးကွက်စိန် မွေးဖွားရာ ရွာလေးပေါ့။ ညဏ်တော်မှာ သဗ္ဗညု၊အနုမှာ အာနန္ဒာ ထုထည်မှာ ဓမ္မရံ ဆိမ်ကမ်းသာတာ လောကနန္ဒာ ဆိုသည်.အတိုင်း သီရိပစ္စယာရွာလေး ဟာလဲ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးမှာ တည်ရှိနေသောကြောင့် ဆိမ်ကမ်းသာတဲ့ ရွာလေးပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ.. ကျွန်တော့်တို့ သာသနာ ထွန်းကားရာ ပုဂံမြေပေါ်မှာ အရင်တုန်းကလဲ ဗလီတွေ မရှိခဲ့သလို အခုကျွန်တော်တို့ လက်ထပ်မှာလဲ ဗလီတွေ မရှိစေချင်ပါဘူး… အဲဒီ အတွက် ပုဂံမြေပေါ်မှာ ဗလီ ဆောက်မယ် ဆိုတာကို လုံးဝ လုံးဝ သဘောမတူနိုင်ပါ… ကျွန်တော့်တို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ် ပုဂံမြေမှာ ဗလီ တစ်လုံးမှ မရှိစေရေး အတွက် ၀ိုင်းဝန်း ကာကွယ်ပေးကြပါစို့….
aDMin >>> ကိုဇီဇာ
from → Burma, MOSQUE, MYANMAR
← #crime #ขบวนการเดียว #กับ #พารากอน #เตรียมปรับ #กำลังเฝ้าระวัง…
#breakingnews #NLD #မနက်ဖန် #၁၀ နာရီ #တနိုင်ငံလုံးက ဒီချုပ်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး #ဆန္ဒပြကြရန် အချက်ပေးပြီ။ →